- डा. कृष्ण बहादुर भट्टचन
छोराछोरी दसैँ किन महान चाड हो भनेर ब्याख्या गर्नुपर्ने गृहकार्य लिएर आउँछन् । अनि त्यसको बारेमा लेख्नुपर्छ । दसैँ मेरो चाड होइन मलाई दसैँको बारे थाहा छैन, म तोरन-लको बारेमा लेख्छु भनेर धर पाइने होइन । आफ्नो चाडको बारेमा लेख्दा प्राप्ताङ्क आउने कुरै छैन । यो बराबरी न्याय भएन । विदा दिने भए सबैलाई बराबर दिनुप¥यो, अरू जातिलाई पनि दसैँमा जस्तै लामो विदा । वर्षभरिको विदाले ३ सय ६५ दिन नै नाघोस्, दिनुप¥यो । बराबरी र न्याय त सबै जनतालाई हुनुप¥यो नि । त्यसो होइन भने एउटा समुदायले उसको धार्मिक र संस्कृतिक चाडमा कति विदा दिइनुपर्छ भनेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सकिन्छ । विदा कम भन्दा कम हुनु राम्रो हो । उत्पादनशील काममा लगाउनु पर्ने समय भोजभतेर र मस्तीमा लगाएर कुनै पनि व्यक्ति, समाज र राष्ट्र उँभो लाग्न सक्दैन, तर पनि चाड मान्न मान्छेलाई विदा चाहिन्छ । त्यसको लागि न्यायसंगत रूपमा विदाको निर्धारण गरिनुपर्दछ । विदा तोकिसकेपछि जुनजुन धर्मावलम्बीले जुन बेला आवश्यक हुन्छ त्यो बेला त्यो विदा उपयोग गर्न सक्ने गरी दिइनुपर्दछ ।
किरातहरूले उधौली र उभौली दुईपटक उपयोग गर्लान् । हिन्दूहरूले दसैँ वा अरू चाडपर्वमा गर्लान् । गुरुङ, तामाङ, शेर्पाहरूले ल्होसारको बेला गर्लान् । थकालीहरूले तोरन-ल को बेला गर्लान् । मुसलमानहरूले इदुल फित्रको बेला गर्लान् । इसाइहरूले क्रिसमसको बेला गर्लान् । त्यो किसिमको समानता भयो भने सबैलाई न्याय हुन्छ । हिन्दूहरूको चाडमा चाहिँ विदाका ठेली दिने, राष्ट्रपति र राष्ट्रका पदाधिकारी त्यसैको पछाडि दौडने अनि देशका जनजातिको चाडलाई बेवास्ता गर्ने हो भने त त्यो त विभेदको पराकाष्ठाको निरन्तरता हो । यस्तो हुनुहुँदैन । न्यायको प्रत्याभूति भयो भने कसैले कसैको विरोध गर्दैन ।
सुरुमा तमुहरूले ल्होसार मनाउने बेलामा टुँडिखेलमा २० जना पनि हुँदैनथे । अहिले गाउँ-गाउँमा त्यो दिनमा चाहिँ उल्लासमय रूपमा घर बाहिर निस्केर मनाउन थालेका छन् । जनजातिहरूमध्ये मगरहरूले सबैभन्दा बढी दसैँ मान्थे । केही समययता भूमि पूजा मनाउन थालेपछि अहिले हेर्ने हो भने भूमि पूजाको दिन माघमा धेरै मगरहरू जम्मा भएर सो पर्व मनाउन थालेका छन् । आदिवासी जनजातिले चाहिँ हिन्दूको चाड मनाइदिनुपर्ने ! आफ्नो चाहिँ राज्यबाट सहयोग नपाई निमिट्यान्न भएको टुलुटुलु हेर्नुपर्ने ? आदिवासी जनजातिको चाड पनि हिन्दूहरूले उत्तिकै भव्य रूपमा मनाइदिने, उत्तिकै समान हैसियतमा विदा र सेवा सुविधा हुने हो भने त एकअर्काको सद्भावको लागि दुवैले दुवैको चाड मान्न सक्छन्, तर देशमा त्यस्तो परिस्थिति कहाँ छ र ? हामीले हिन्दू धर्म मानिदिँदा के फरक पर्छ त भन्ने हो भने आफ्नो धर्म संस्कृति बिलाउने भो । अर्काको हाबी हुने भो भने आफ्नो चाहिँ सिद्धिने भो । किनभने बच्चाहरूले आफ्ना बाबुबाजे वा आफूभन्दा ठूलाले कुन चाहिँ चाड मान्छन् भनेर हेर्छन्, र सिक्छन् । हिन्दूको चाड मान्दा उनीहरूमा सो चाडकै गहिरो छाप पर्ने भो । आफ्नो चाडमा भन्दा अरूको चाडको भव्यता देख्दाखेरि बच्चाहरूमा पनि हिन्दू चाडमा बढी लगाव हुने भो । आफ्नो चाड धुमधामले मनायो भने आफ्नो चाडमा लगाव हुन छोड्छ । अहिले मेरो छोराछोरीहरूलाई दसैँ जस्तो अरूको चाडमा कुनै लगाव छैन । किनभने हामी दसैँ मान्दैनौं । तोरन–ल मात्रै मान्छौं । मेरो परिवारमा दसैँ आउनु र कागलाई बेल पाक्नु एउटै कुरा हो ।
(स्रोत : इसमता)